Kachasị Micronized Palmitoylethanolamide ntụ ntụ-Manufacturer factory
Palmitoylethanolamide ntụ ntụ (PEA)
Cofttek bụ Palmitoylethanolamide (PEA) kacha emepụta ntụ ntụ na China. Ụlọ ọrụ anyị nwere sistemụ njikwa mmepụta zuru oke (ISO9001 & ISO14001), yana ikike mmepụta kwa ọnwa nke 3200kg.
Palmitoylethanolamide (PEA) ntụ ntụ (544-31-0) video
Palmitoylethanolamide ntụ ntụ (PEA) Smmezi
aha: Palmitoylethanolamide (agwa)
ọcha 98% ntụ ntụ PEA ； 98% ntụ ntụ
Usoro Molecular: C18H37NO2
Molekụla arọ: 299.49 g / mol
Melt Point: 93 ka 98 Celsius C
Aha aha: Nrụrụ ọrụ Hydroxyethylpalmitamide Palmidrol N-Palmitoylethanolamine Palmitylethanolamide
ngwa: Palmitoylethanolamide (PEA) sitere na ezinụlọ endocannabinoid, otu ìgwè nke amy acid amides. E gosipụtara PEA nwere ọrụ nyocha na mgbochi mkparị ma jiri ya n'ọtụtụ ọmụmụ a na-achịkwa lekwasịrị anya na njikwa ihe mgbu na-adịghị ala ala n'etiti ndị ọrịa toro eto nwere ọnọdụ ọgwụgwọ dị iche iche.
Palmitoylethanolamide (544-31-0) NMR ụdịdị dị iche iche
Palmitoylethanolamide bụ endogenic fatty acid amide nke dabara n'okpuru klaasị nke Agonists Nuclear Factor Agonists. Ọ na -apụtakarị na nri dị ka soybean, ahụekere lecithin, na ahụ mmadụ.
Achọpụtara Palmitoylethanolamide na mbido 1940. Ndị ọkà mmụta sayensị buru ụzọ chọpụta na iri akwa nkochi ime akwa kwalitere nzaghachi ahụike dị mma n'ahụ ụmụaka ma belata ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa rheumatic. Nnyocha ọzọ kwubiri na nkochi akwa nwere ihe pụrụ iche ya bụ, PEA. Achọpụtala PEA na nri niile dị ka ahụekere na soybean, nke na -enye aka na -enye mgbochi siri ike yana uru ahụike.
Ewezuga na -ahụ ya na nri ụfọdụ, PEA na -emekwa na ahụ anyị n'ụzọ nkịtị. Ọtụtụ sel anyị na -emepụta kemịkal ahụ anyị dị ka akụkụ nke nzaghachi ahụike adịghị mma. A na -eme PEA n'ụzọ pụrụ iche maka nzaghachi mbufụt. A maara ya ka ọ na -achịkwa ihe mgbu anyị na ahụ site na ichebe usoro ahụ anyị ji alụso ọrịa ọgụ ka ọ ghara imebiga ihe ókè na ọ na -akwalite mmeghachi ahụ ike na mmeghachi omume mkpali na ahụ.
A na -ejikarị Palmitoylethanolamide ntụ ntụ dị ka ọgwụ maka mgbu, fibromyalgia, mgbu neuropathic, otutu sclerosis, ọrịa ọwara carpal, na ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ.
Palmitoylethanolamide na ezinụlọ Cannabinoid
Palmitoylethanolamide esiteghị na cannabis mana enwere ike ịtụle ya dị ka ezinụlọ cannabinoid. PEA na -arụ ọrụ n'otu aka ahụ na CBD (cannabidiol), nke bụ otu n'ime ihe ndị mejupụtara cannabis mana ọ nweghị mmetụta psychogenic. Ngwaahịa CBD na -ewu ewu n'oge a ma enwere ya n'ihe niile site na mmanụ ruo ude, na ngwaahịa nri. A na -ejikwa ngwaahịa CBD maka ọtụtụ uru ahụike nwere ike, gụnyere ahụike, akwara na ahụike.
PEA bụkwa cannabinoid, mana a na -enyocha ya dịka njedebecannabinoid dịka esi eme ya n'ime ahụ. Agbanyeghị, ọ dị iche na cannabidiol na tetrahydrocannabinol dịka ahụ anaghị eme kemịkal ndị a.
Palmitoylethanolamide na-akpalite ọkụ na-ere abụba, na-eme ka ume dị elu, yana mgbochi mkpali PPAR alfa. Mgbe protein ndị a dị mkpa na -arụ ọrụ, PEA na -akwụsị ọrụ mkpụrụ ndụ ihe nketa nwere ike ịkwalite mbufụt ma belata mmepụta nke ọtụtụ ihe mkpali. PEA na -ebelata ọrụ nke mkpụrụ ndụ ihe nketa FAAH nke na -akụghasị cannabinoid anandamide ma bulie ogo anandamide n'ime ahụ. Anandamide bụ ọrụ maka ibelata mgbu gị, mee ka uche gị dajụọ, na ịkwalite izu ike n'ahụ gị.
A makwaara PEA ka ọ na -ejikọ na sel anụ ahụ ma belata mgbu na ọzịza. O nwere palmitic acid n'ụdị ya, nke na -enyere ahụ aka ime Palmitoylethanolamide n'ime ahụ.
Dị ka ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo, naanị ịba ụba oriri nke palmitic acid agaghị emetụta mmepụta PEA. Nke a bụ n'ihi na ahụ gị ga -eji PEA naanị n'ime ahụ gị naanị mgbe ọ kwesịrị ịgwọ mbufụt gị ma ọ bụ mgbu gị. Nke a na -ebute ọkwa PEA n'ime ahụ na -agbanwekarị ụbọchị niile.
Ụzọ kacha mma ị ga-esi nweta uru nke PEA bụ site na iri ihe oriri bara ọgaranya nke PEA ma ọ bụ mgbakwunye agbakwunyere.
Palmitoylethanolamide ntụ ntụ uru na ngwa
E gosipụtara na PEA nwere ihe mgbu na ihe mgbochi mkpali ma ejiri ya maka njikwa nke mgbu na-adịghị ala ala n'etiti ndị okenye nwere ọtụtụ ọnọdụ ụlọ ọgwụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịnye nsonaazụ enyemaka dị ka adjuvant maka ịgwọ mgbu azụ dị ala na ndị ọrịa agadi ma ọ bụ enwere ike iji ya naanị maka njikwa mgbu na -adịghị ala ala na ndị ọrịa siri ike n'ọnọdụ analgesics ọdịnala nke nwere nnukwu ihe egwu.
Egosipụta nsonaazụ na-ekwe nkwa na ịgwọ ọrịa radiculopathies na-abụghị ịwa ahụ yana usoro PEA nke nwere obere micronized yana ọgwụgwọ njikọta na alpha-lipoic acid iji belata ọrịa prostatitis na-adịghị ala ala/ọrịa mgbu pelvic na-adịghị ala ala.
N'okpuru bụ ụfọdụ nnukwu uru nke PEA:
· Enyemaka Mgbu
Enwere ụfọdụ ihe akaebe na -egosi na ikike PEA nwere ibelata nnukwu mgbu. A nyochaala PEA n'ihe karịrị puku mmadụ 6 na ọnwụnwa ụlọ ọgwụ 30 kemgbe afọ 1070. Agbanyeghị, ọmụmụ ihe anaghị enwekarị ikewa ọdịiche dị n'etiti mgbu neuropathic na nke na-abụghị neuropathic. Ndị uru nke Palmitoylethanolamide maka mgbu neuropathic adịchaghị ọcha n'ihi ozi ezughị ezu ruo taa.
Mgbochi ọzọ bụ na ọtụtụ n'ime ọmụmụ ihe ndị a enweghị njikwa placebo na achọrọ nyocha dị elu iji kpebie ịdị irè nke PEA n'ibelata ụdị mgbu dị iche iche.
N'ime nyocha nke ọmụmụ mmadụ 12, mgbakwunye PEA gosipụtara ịdị irè na mbelata ike mgbu na -adịghị ala ala na neuropathic na -enweghị nnukwu mmetụta ọ bụla. A na -enyekarị mmadụ iri na abụọ ahụ ihe mgbakwunye PEA na ọnụọgụ n'etiti 12 ruo 200 mg/ụbọchị maka ihe karịrị izu 1200 ruo 3. Ihe mgbakwunye ahụ were ihe dị ka izu abụọ iji nweta ọnọdụ na-ebelata mgbu. Iwere ya ogologo oge zụlitere mmetụta ya na -enweghị mmetụta ọjọọ ọ bụla.
Ọmụmụ ihe ọzọ emere na 300 ma ọ bụ 600 mg/ụbọchị nke PEA gosipụtara mbelata siri ike na mgbu sciatica na nnwale dị mkpa nke ihe karịrị mmadụ 600. PEA belatara ihe mgbu karịa 50% n'ime naanị izu atọ, nke ọtụtụ ndị na -egbu mgbu anaghị enweta ya.
· Ahụike ụbụrụ na ịmụgharị
A makwaara PEA na ọ bara uru maka ọrịa neurodegenerative na ọrịa strok. A na -ahụ ihe mgbakwunye ahụ iji melite ọrụ ụbụrụ site n'inyere mkpụrụ ndụ ụbụrụ aka ịlanarị na ibelata mbufụt.
N'ime nyocha nke ndị ọrịa ọrịa strok 250, usoro nke PEA nwere luteolin gosipụtara akara mgbake ka mma. A na -ekwuputakwa na ọ nwere mmetụta bara uru na ahụike ụbụrụ dị mma, nka ọgụgụ isi, na ụbụrụ kwa ụbọchị na -arụ ọrụ. A na -ahụ mmetụta ya mgbe ụbọchị 30 nke mgbakwunye na mgbe mgbe ọnwa abụọ nke mgbakwunye gasịrị, achọpụtara mmelite ka mma.
Ha abụọ nwere luteolin na naanị ya, a hụrụ PEA iji gbochie ọrịa Parkinson na ụmụ oke mgbe ejiri ya na luteolin. Ọ na -ebelata mbibi nke ụbụrụ site na ichebe mkpụrụ ndụ dopamine. Agbanyeghị, achọrọ ọmụmụ ụlọ ọgwụ ọkọlọtọ iji nyochaa nchoputa ndị a.
Nnyocha ọzọ gosiri na PEA nwere luteolin nyere aka kwalite ihe neurotrophic dị ka BDNF & NGF nke bụ obere protein dị ike bara uru iji mepụta mkpụrụ ndụ ụbụrụ ọhụrụ. Ọ kwalitere ikike nke ụbụrụ imegharị sel ọhụrụ na anụ ahụ mgbe nsogbu mebiri akwara ma ọ bụ ụbụrụ mebiri. Mgbe ejiri PEA yana luteolin na ụmụ oke ọ kwalitere ịgwọ akwara na ụmụ oke nwere mmerụ ahụ akwara.
N'ihi ihe ndị sitere n'okike nke cannabinoids na PEA, mmetụta ahụ gosipụtara nkwalite na omume, ọnọdụ ndị ọrịa. O gosipụtara mbelata ihe ọghọm na oke. Otú ọ dị, a ka ga -enyocha mmetụta ọ na -enwe n'ihe ọdịdọ na mmadụ yana a ga -achọkwu ọmụmụ ihe iji chọpụta nke a.
· Mmetụta na Obi
A nkụchi obi na -eme n'ihi mkpọchi arịa ọbara na -aga n'obi. A maara PEA ka ọ weghachite mmebi nke anụ ahụ obi ma mee ka ọbara na -asọba n'obi nke na -enyere aka belata ikpe nke nkụchi obi. Nnyocha e mere na oke na -egosi iwetu ọkwa nke cytokine mkpali n'ime obi.
Ojiji PEA belatara ọkwa ọbara mgbali elu na oke ma gbochie mmebi akụrụ site na mbenata ihe ndị na -afụ ụfụ. Site n'ibelata arịa ọbara, PEA dị irè igbochi enzymes na ndị na -anabata ọbara mgbali elu.
· Ihe ịrịba ama nke ịda mbà n'obi
N'ime nnyocha e mere n'oge na -adịbeghị anya, mmadụ 58 na -arịa ịda mba bụ ndị PEA gwọrọ ha. A na -enye ndị ọrịa ọgwụ 1.2 gm kwa ụbọchị maka ihe karịrị izu isii. Nke a rụpụtara mmụba ngwa ngwa nke ọnọdụ na mgbaàmà niile. PEA mgbe agbakwunyere na ọgwụgwọ antidepressant ntụgharị, citalopram, belatara ihe mgbaàmà nke ịda mba site na ọkọlọtọ 6%.
· Mgbaàmà nke oyi nkịtị
Nnyocha ọzọ gosiri PEA ka ọ bụrụ ọgwụgwọ dị mma iji lụso nje influenza na -ebute oyi nkịtị. N'ime nyocha mbụ nke ihe karịrị puku mmadụ 4, PEA nwere ike gosipụta mmetụta dị mma na mgbochi ma nyere aka belata ihe mgbaàmà dị ka ndị ọrịa.
N'ọmụmụ ihe ọzọ, enyere ndị na -eto eto 900 ndị agha ihe dị ka 1,200 mg PEA nke belatara oge oyi na ọgwụgwọ ọrịa dị ka akpịrị mgbu, imi, ahụ ọkụ, na isi ọwụwa.
· Ọkpụkpụ akpịrị
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ejiri PEA mee ihe nke ọma iji tụgharịa ihe ịrịba ama nke ọrịa eriri afọ mkpali (IBS) n'ime anụmanụ. Ihe mgbakwunye PEA mgbe a nwalere ya na ụmụ oke nwere ọnya afọ na -adịghị ala ala, nyere aka mee ka mgbatị afọ dị mma ma gbochie mmebi nke eriri afọ.
Ọrịa afọ ma ọ bụ mbufụt bụ ulcerative colitis nke nwere ike ibute ọrịa kansa. Ojiji nke PEA kwụsịrị anụ ahụ eriri afọ na -akwalite ịba ụba ọrịa kansa na ụmụ oke. PEA na -ebelata cytokines mkpali na uto nke neutrophils na sel na -alụso ọrịa ọgụ nke na -eme ka ihe mgbaàmà nke mmebi ahụ ka njọ.
Isi nri Palmitoylethanolamide
Ọ bụ ezie na PEA bụ acid abụba juru eju, gụnyere abụba juru eju na nri gị ga -emebi ihe karịa ka ọ dị mma. Iri nri dị oke abụba nwere abụba agaghị eme ka nrụpụta PEA nke ahụ gị pụta kama ọ ga -abawanye ohere nke ibute ọrịa na -adịghị ala ala na mkpali.
Nri dị ka ngwaahịa soy, lecithin soy, ahụekere, na alfalfa bụ nnukwu isi mmalite nke PEA. Ndị nwere ihe nfụkasị ahụ nut ga -ahapụrịrị ahụekere wee rie nri ndị ọzọ. Akwa nkochi ime akwa bụ ebe ọzọ dị mma ma enwere ike iri ya site na ndị na -enweghị uche na àkwá. Ndị na -eri ihe nwekwara ike ịtụle ị nweta mgbakwunye PEA n'ihi na ọ bụ nchekwa na nhọrọ dị mma.
PEA na -agbakwunye usoro onunu ogwu & nchekwa
Dabere na ọmụmụ ụlọ ọgwụ, ọ dịkarịa ala 600 mg/ụbọchị nwere ike ịchọ iji belata mgbu akwara, yana enwere ike iji doses nke 1.2 g/ụbọchị iji gwọọ mgbu akwara ọrịa shuga.
Maka ndị ọrịa na -arịa ọrịa shuga na -enwe nsogbu anya, ọgwụ ruru 1.8 g/ụbọchị dị irè maka mbenata mmebi akwara anya.
Maka ọgwụgwọ nke oyi nkịtị, 1.2 g/ụbọchị PEA bụ usoro onunu ogwu.
Gwa dọkịta gị okwu tupu ị gbakwunye ihe mgbakwunye nke PEA ka FDA anabataghị PEA ka ọ were were buru ibu.
A na -ewerekarị Palmitoylethanolamide ntụ ntụ ma ọ bụ ihe mgbakwunye na obere, obere doses na -adị mma. Agbanyeghị, a chọrọ ọmụmụ ụlọ ọgwụ dị elu karịa maka oke doses. Mgbakwunye PEA ogologo oge ka amarakwara na ọ nweghị nchekwa dịka ụfọdụ ọmụmụ obere.
Ụfọdụ ndị na -emepụta ihe site na ụlọ nrụpụta PEA na -atụ aro ikewa oke ọgwụ ahụ n'ime ụzọ abụọ ma rie ya n'ehihie. N'ọnọdụ ụfọdụ, PEA micronized, nke dị n'okwu dị mfe bụ ezigbo palmitoylethanolamide ntụ ntụ, ka amara na ọ na -etinye obi ya nke ọma na ndị ọkà mmụta sayensị weere na ụdị ntụ ntụ dị elu karịa ụdị ndị ọzọ.
Mmetụta mmetụta PEA
A na -ewerekarị oriri ọnụ nke palmitoylethanolamide dị mma maka ọtụtụ ndị okenye mgbe ejiri ya ruo ọnwa atọ. Ruo taa, ọ nweghị nnukwu nsogbu ma ọ bụ mmekọrịta ọgwụ na ọgwụ ka achọpụtara. Agbanyeghị, enweghị ozi zuru oke ikwu na ọgwụ nwere ike ịdị mma mgbe ejiri ya ihe karịrị ọnwa atọ. Mmetụta dị n'akụkụ nwere ike ịgụnye afọ na -ewe iwe, nke dị obere.
Iji dokwuo anya, PEA ebuteghị nnukwu nsogbu na ọmụmụ ọ bụla dị n'elu mana ọ ka enweghị ọmụmụ nchekwa kwesịrị ekwesị. Ọzọkwa, enweghi ihe akaebe zuru oke iji chọpụta oke arụmọrụ PEA na ndị ọrịa nwere ụdị mgbu a.
Ime na ụmụaka
A na -ahụta PEA ka ọ dị mma maka iji ndị okenye yana ọmụmụ ihe ole na ole egosighi obere ihe egwu dị na ụmụaka. Mana ọmụmụ buru ibu ga -achọ ịchọpụta nchekwa nke PEA n'ime ụmụaka. N'ihi enweghị data ụlọ ọgwụ zuru oke, a na -atụ aro ụmụ nwanyị dị ime na ndị na -enye nwa ara ka ha kpachara anya wee gakwuru dọkịta tupu ha ewere ihe mgbakwunye PEA ọ bụla.
PEA belatara ọtụtụ mmetụta na ihe mgbu mgbe ọ na -eme ka ndụ ka mma. Ọmụmụ ya na -akwado nchekwa na arụmọrụ nke acid fatty acid ma na -atụ aro ka ọ dị mma na iji ọgwụ PEA. Ihe mgbakwunye a kachasị dị irè maka ọrịa mkpakọ gụnyere ọrịa ọgbụgba ọwara carpal na mgbu sciatic. Mgbakwunye PEA dịkwa mfe iwere yana enwere ike inye ya ọnụ.
Cheta ị gakwuru dọkịta tupu ị were ihe mgbakwunye PEA ọ bụla n'ihi na oke PEA nwere ike bute ụfọdụ nsogbu. Ọ bụ ezie na nsogbu ndị ahụ na -adịkarị obere ma na -adịchaghị njọ, ekwesighi iji PEA dochie anya ọgwụgwọ ahụike akwadoro. Agbanyeghị, a na-eme uru na ọmụmụ ihe akọwapụtara nke ọma n'ime anụmanụ na sel. Ihe akaebe ụlọ ọgwụ kwụsiri ike ka dị ụkọ.
Achọkwuru ọmụmụ ihe n'ime mmadụ iji chọpụta mmetụta nke PEA na ahụike gut, obi, na mwepụta histamine.
Palmitoylethanolamide (PEA) ntụ ntụ maka ọrịre & Ebe ịzụta Palmitoylethanolamide (PEA) ntụ ntụ na nnukwu
Anyị bụ ọkachamara na-eweta Palmitoylethanolamide (PEA) ntụ ntụ maka ọtụtụ afọ, anyị na-enye ngwaahịa na ọnụahịa asọmpi, ngwaahịa anyị dịkwa mma kachasị elu ma na-anwale nnwale siri ike iji hụ na ọ dị mma maka oriri gburugburu ụwa.
Hansen HS. Palmitoylethanolamide na ndị ọzọ anandamide congeners. Bụrụ atụpụtara na ụbụrụ ọrịa. Nechụpụ Neurol. 2010; 224 (1): 48–55
Petrosino S, Iuvone T, Di Marzo V. N-palmitoyl-ethanolamine: biochemistry na ohere ọgwụgwọ ọhụụ. Biochimie. 2010; 92 (6): 724-7
Cerrato S, Brazis P, della Valle MF, Miolo A, Puigdemont A. Mmetụta nke palmitoylethanolamide na immunologically induated histamine, PGD2 na TNFα tọhapụ mkpụrụ ndụ mast akpụkpọ. Vet Immunol Immunopathol. 2010; 133 (1): 9–15